Real Madrid oo ku Guuleysatay Champions League - Jazeera FM
Real Madrid oo ku Guuleysatay Champions League
June 3, 2017 admin featured
Cayaartan oo aheyd mid siweyn loo wadda sugayay ayeey Real Madrid xaqiiqsatay guusha Champions League lugtii ugu danbeysay kaddib markii 4-1 ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Juventus.
Cayaaryahanka Cristiano Ronaldo ayaa daiiqaddii 20-aad ka dhaliyay kooxda Juventus goolkii ugu horeeyay, hasse ahaatee wax yar uun kaddib daqiiqadii 27 waxaa gool aad u qurux badan ka dhaliyay kooxda Real Madrid Mario Mandzukic oo kubad uu siwanaagsan u qaabeystay ku hubsaday goolka kooxda Real Madrid.
Markii leysugu soo laabtay qeybtii labaad ee cayaarta waxaa goolkii 2aad u dhaliyay kooxda Real Madrid cayaaryahan Casemiro, halka Cristiano Ronaldo uu dhaliyay goolka saddexaad oo noqonaya goolkiisii labaad cayaarta, waxaase rajadii kooxda Juventus baabi’iyay Marco Asensio oo badal ku soo gallay kaa oo daqiiqadihii dhamaadka dhaliyay goolka 4aad ee Real Madrid ay ku badisay.
Ugu danbayn Cayaarta ayaa ku dhamaatay 4-1 ay Real Madrid ku dubatay Juventus isla markaana ay taariikh cusub ugu abuurtay kooxaha Yurub iyada oo noqotay kooxdii ugu horaysay ee difaacatay koobka UEFA Champions Leaque-ga intii qaabka hadda yahay loo dhigay horaantii sagaashamaadkii.
Inkastoo guushan Real Madrid ay u noqoneyso mid muhiim u aheyd, haddana dhinaca kale waxaa siweyn ugu baahi qabay koobankan kooxda Juventus, balse rajadaasi ma noqon mid hergasha waloow bilowgii hore ee cayaarta kooxda Juventus ay la soo gashay cayaar aan laga fileyn iyadoo weeraro xoogan ku qaaday goolka kooxda Real Madrid.
← kacdoon dadweyne oo ka dhashay qaraxii Kabul
Horumarka Bulshada →